China Ukhuseleko lwezilwanyana ucingo olune-hexagonal wire mesh umzi-mveliso kunye nabanikezeli |XINTELI
Ucingo lokhuseleko lwezilwanyana olune-hexagonal wire mesh
Umqala: 13mm, 25mm, 16mm, 20mm, 30mm njl.
ucingo Ububanzi: 0.6mm ~ 2.0mm
Ubude: 5m, 10m, 25m, 30m okanye njengeemfuno zakho
Ububanzi: 50cm, 100cm okanye ngokweemfuno zakho.
Isimbo sokuluka:Ijijeji ethe tye, ijiji ejija umva
Isicelo: iikheji zeenkukhu, ihupula yenkukhu, inethi yomvundla, umnatha wokuhombisa, ukukhuselwa kwendawo.
Izibonelelo zeMveliso: Ukusetyenziswa ngokulula, ubomi benkonzo ende, amandla okhuseleko aphezulu, kulula ukusika, ukuguquguquka okuhle.
Ucingo lwenkukhu okanye isefu yenkukhu, lucingo oluguquguqukayo, olusetyenziswayo kwaye lufumaneka kwihlabathi liphela.Iza ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ukusuka kucingo oluncinci oluqinileyo ukuya kwinethi enkulu ethambileyo.Isetyenziselwa ukugcina izilwanyana kwindawo okanye ukugcina izilwanyana kwindawo ethile.
Umnatha wocingo owenziwe ngesinyithi ukwabizwa ngokuba yi-galvanized hexagonal wire mesh. Ngokuqhelekileyo, i-diameter yocingo yi-0.6mm ukuya kwi-2.0mm. Imitha yedayamitha yocingo ixhomekeke kubungakanani be-hexagonal mesh open. .Ukuba ufuna umnatha wocingo usebenzise ixesha elide.Kuhle ukukhetha igalvanized okanye iplastiki egqunywe ngeplastiki.Imesh iqinile ngokwesakhiwo kwaye inomphezulu osicaba.I-hexagonal wire mesh roll inokuba ncinci kwaye ibe nkulu.
Siyakwazi ukubona umnatha wocingo olunehexagonal olunehexagonal rhoqo kubomi bethu bemihla ngemihla. Okufana, i-hexagonal wire mesh inetha esetyenziselwa ukukhulisa iinkukhu (ngoko ke sinokuyibiza ngokuba ngumnatha wocingo lwenkukhu), ucingo lwezilwanyana, ukhuseleko lwe-equitment ngomatshini. igabion, esetyenziselwa ukukhusela nokuxhasa iindonga zolwandle, iinduli, iibhulorho.I-galvanized chicken wire mesh sisixhobo esihle kakhulu njengolawulo lwezikhukhula kunye nokulwa nezikhukhula.
1.Hot dipped galvanized(HDG)emva kokuluka
2.Hot dipped galvanized(HDG)phambi kokulukwa
3.Umbane ufakwe igalvan emva kokuluka
4.Umbane ufakwe igalvanized phambi kokulukwa
Izibonelelo zeMveliso: Ukusetyenziswa ngokulula, ubomi benkonzo ende, amandla okhuseleko aphezulu, gcina iindleko zokuhamba, ukuguquguquka okuhle.
Sigxininise kule ntsimi iminyaka emininzi.Iisampulu zibonelelwa kwaye ii-odolo zesilingo esincinci sinokuvuma.Ixabiso lethu lifanelekile kwaye ligcine umgangatho ophezulu kubo bonke abathengi.
Ngaphambili: Ixabiso eliphantsi kakhulu eTshayina 2′′ X 2′′ Hot Dipped Galvanized Welded Mesh Panel Isetyenziselwe iGarden Fence
Okulandelayo: Uyilo oluKhethekileyo lwaseTshayina oluSetyenzisiweyo oluXhekelkileyo oluXinyo lokuNxibelelana ngocingo/PVC edityanisiweyo eSetyenziselwe ucingo lwekhonkco oluthengiswayo.
1 Intshi Mesh Chicken Wire
Ibhokisi yeGabion eneHexagonal Wire Mesh
Umnatha wocingo olunehexagonal olunehexagonal olunesiqingatha socingo lwezilwanyana